Iprojekthi yeGoFundMe Wall ayikhiwanga 'kweyona Mile ibalulekileyo' yeBorderland, ngaphandle kwamabango, amagosa athi. - Ihlabathi
Izimvo Zokulala Zabantwana
Umceli Mngeni Omnye
Ukuhonjiswa Kwehlobo Kunye Nesitayile
Iprojekthi yeGoFundMe Wall ayikhiwanga 'kweyona Mile ibalulekileyo' yeBorderland, ngaphandle kwamabango, amagosa athi.
Ithunyelwe ngoMeyi 30, 2019, 10:28 pm UJose Luis Gonzalez / Reuters
Oomatshini abanzima bahambisa udonga lohlobo lwe-bollard, ukuba lubekwe ecaleni komda wepropati yabucala kusetyenziswa imali eqokelelwe kwi-akhawunti yeGoFundMe, eSunland Park, eNew Mexico.
Abasemagunyeni e-US ngoLwesine bathi iprojekthi yodonga oluxhaswe ngabantu abaninzi ehlawuliswe ngowayesakuba ngumcebisi we-White House njengoko ukuvala 'eyona mayile ibalulekileyo' ecaleni komda ayisiyondawo ethathwa njengeyona nto iphambili kwezokhuseleko.
USteve Bannon, owayesakuba ngusomaqhinga kaMongameli uTrump kunye nosihlalo webhodi yabacebisi kwiphulo elithi 'Sakha udonga', elixhasa ngemali ukwakhiwa kodonga eSunland Park, eNew Mexico, uxelelwe I-CNN ukuba izikhulu ze-Border Patrol zathi 'yiNombolo ye-1 eyona nto ibalulekileyo yokuvala.'
Kodwa kwingxelo, i-US Customs kunye noKhuseleko lweBorder lwathi 'iprojekthi ayixhunyiwe kwimigudu yethu,' yongeza ukuba sele ibeke phambili imiqobo yokwakha imida kwiindawo 'eziya kuchaphazela kakhulu imisebenzi yokhuseleko lomda.' Indawo apho inkampani yokwakha eseMntla Dakota iFisher Industries yakha khona udonga kumhlaba wabucala 'ayibekwa phambili phantsi kwenkxaso-mali yangoku,' yongeza le arhente.
Sisebenzisa izigidi kwiinzame zokunyusa ingxowa-mali, Sakha udonga ukuza kuthi ga ngoku lwakha malunga nesiqingatha semayile yesithintelo, esijongene nokutyhalwa ngamagosa esixeko saseSunland Park.
NgoLwesibini, isixeko sikhuphe umyalelo wokumisa umsebenzi wale projekthi emva kokuba amagosa efumanise ukuba isicelo esifakwe kwiveki ephelileyo sodonga asiphelelanga kwaye sophula ummiselo. Nangona kunjalo, ngoLwesine, uSodolophu uJavier Perea uxelele iintatheli ukuba umsebenzi uvunyelwe ukuba uqalise emva kokuba imiba yemvume isonjululwe.
UBrian Kolfage, igqala leMfazwe yase-Iraq elihonjisiweyo elikhokela eli phulo, kutwetwe Iqela libambe umsitho wokusika iiribhoni kumajelo eendaba kunye namalungu ebhodi.
UBrian Kolfage @BrianKolfage
Usuku lweMedia luhamba kakuhle!
08:19 PM - 30 May 2019
Kwinkomfa yabezindaba, uPerea uthe le projekthi yahanjiswa ngololiwe esixekweni, kwaye ukuya kuthi ga kwi-80% yeprojekthi sele yakhiwe ngoku. Kusekho imiba ekufuneka iqwalaselwe, wongeze watsho, enje ngeenyawo, amanzi okuhambisa amanzi, kunye nezicwangciso zesiseko ekusafuneka isitampu semvume evela kwinjineli yaseNew Mexico eqinisekisiweyo.
imibono encinci yeshawari yokuhlambela
Abameli beSakha udonga abazange baphendule ngokukhawuleza kwizicelo zokubeka izimvo.
Ukwakhiwa kodonga lomda, ilitye lembombo lephulo likaTrump, lisaqhubeka nokujongana nemingeni njengoko elungiselela unyulo luka-2020. Ngokwamaxwebhu enkundla, i-CBP ukuza kuthi ga ngoku yakha kuphela i-1.7 yeekhilomitha zocingo kunye ne-Congress ye-1.6 yeebhiliyoni zeedola ezabelwe i-2018. Kodwa imingeni kunye nesantya sokwakha ayizange ivimbe iTrump ukuba ithembise ukwakha i-500 yeekhilomitha zodonga lomda ekupheleni kwe-2020. kwindibano ePennsylvania kwiveki ephelileyo.
I-Associated Press ingxelo ukuba ukuza kuthi ga ngoku abalawuli banikezele iikhontrakthi zokwakhiwa kweendonga ezingama-244 zeemayile, uninzi lwazo zezezithintelo zokutshintshwa kunye nokubiyelwa. Ngaphezu kwesiqingatha semali sivela kwiSebe lezoKhuselo, apho iTrump yangena phantsi kwesibhengezo esiphuthumayo ngoFebruwari.
Kwiveki ephelileyo, ijaji yaseCalifornia eyongamele amatyala amabini acela umngeni kulwakhiwo lodonga inike umyalelo wokuqala othintela ulawulo lukaTrump ekubuyiseleni imali phantsi kwesibhengezo sakhe. Lo myalelo wawulinganiselwe kumsebenzi wokwakha e-El Paso, eTexas, naseYuma, eArizona.
Okungakumbi kule nto
'Ndaziva ndimdaka': Ababesakuba ngabaSebenzi kwi-Veteran Crowdfunding's Wall kaTrump bathi watyhala iindaba ezingeyonyani ukuze babe zizityebi.UBrianna Iingxowa ·NgoJanuwari 11, 2019
Abasemagunyeni baseMelika baqinisekise ukuba intombazana eneminyaka eli-10 ubudala yasweleka eluvalelweni kunyaka ophelileyo.Adolfo Flores ·Ngomhla wama-23 kuCanzibe, ngo-2019
Baxelelwa Iintsuku ezingama-45. Ngoku abo bafuna i-Asylum bayanyanzelwa ukuba balinde ukuya kuthi ga kunyaka eMexico.Adolfo Flores ·Ngomhla wama-22 kuCanzibe, ngo-2019
indlu yokubhukuda emhlophe
iikhabhathi zamagumbi amancinci